Xulka Gabdhaha Holland oo usoo baxeen Koobka Aduunka 2019 La Cayaari doono
Saturday November 24, 2018 - 23:53:07 in Wararka by Mogadishu Times
Xulkan Gabdhaha Holland ayaa usoo baxeen ka qayb qaadashada koobka hablaha aduunka ee sanadka dambe dalka France marti galin doonaan. Holland ayaa 4-1 ku garaaceen xulka hablaha Switzerland isku darka labada lug cayaar Playy Off ahayd waxayna u da
Xulkan Gabdhaha Holland ayaa usoo baxeen ka qayb qaadashada koobka hablaha aduunka ee sanadka dambe dalka France marti galin doonaan. Holland ayaa 4-1 ku garaaceen xulka hablaha Switzerland isku darka labada lug cayaar Playy Off ahayd waxayna u dabaal dageen iska xaadirinta koobka aduunka xagaaga dambe France lagu balansan yahay.
Isku aadka koobka aduunka hablaha waxaa la sameyn doonaa 8 bisha December ee nagu soo fool leh ama sanadkan halka tartankan gudaha France lagu qaban doono inta u dhaxeyso 7 June 2019 ilaa 7 July 2019.
Xulalka dhanka qaarada Yurub ilaa haatan koobka aduunka 2019 usoo baxeen: France (marti galiyaasha), England, Germany, Netherlands, Norway, Italy, Scotland, Spain, Sweden.
Xulalka kale ee qaaradaha kale kasoo baxeen ee koobka aduunka 2019 ka qayb qaadanayaan Australia, Brazil, Canada, Chile, China, Argentina Jamaica, Japan, South Korea, Thailand, United States (difaacadayaasha koobka).